साताको तस्वीर : माहुरीको फुलबारी ! – ebaglung.com
साताको तस्वीर : माहुरीको फुलबारी !
२०७४ फाल्गुन १९, शनिबार ०६:२२	Footer Slider, Full Slider, Top News, अन्य समाचार, विचित्र
शव्द/चित्र बिमल खड्का, बागलुङ २०७४ फागुन १९ । बागलुङ जिल्लाको बडीगाड गाउपालिका १ (साविक दगातुंडाडा गाविस) का बोमबहादुर थापा फुर्सदको समय माहुरी (मौरी)संग खेलिरहेका हुन्छन् । उनी माहुरी पालक कृषक हुन् र यो उनको पुख्र्यौली व्यवसाय पनि हो । उनक बाबुले पनि माहुरी (मौरी) पालेरै घरपरिवार धानेका थिए ।
४९ वर्षिय थापालाई माहुरी (मौरी)को स्याहार सुसारमा समय बितेको पत्तो नै हुँदैन । उनको घर वरपर माहुरी (मौरी)का ५ दर्जन बढी घारहरुमा देख्न सकिन्छ । माहुरी (मौरी)को मधुर घुनघुनाहटबीच थापाको दैनिकी बितेको छ । उनको घरबारी नै माहुरी (मौरी)को फुलबारी बनेको छ ।
त्यसो त, पौरखी थापा, माहुरी (मौरी) पालककृषकको भूमिकामा मात्रै सीमित छैनन्, आफ्नै गाउँको खड्ग देवी माबिको शिक्षक पदमा झण्डै २९ वर्ष सेवा गरेर सेवा निबृत्त भएपछी अहिले उनलाई वडावासीहरुले गाउपालिकाको वडाध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पिएका छन् । जाँगरिला थापालाई यसले कुनै फरक पारेको छैन । उनैको शव्दमा, ‘वडावासीको सेवा अनि माहुरी (मौरी)को स्याहार सुसार गर्न दिक्कत महसूस गरेको छैन । छ जनाको परिवार छौ मिलिजुली काम गर्छौँ ।’
आफु कहाँ आउने पाहुनाहरुलाई मालीले फुलबारी घुमाएझै थापाले माहुरी (मौरी)का घारहरु देखाएर स्वागत गर्छन् । माहुरी (मौरी) पाल्ने देखी मह काढ्ने विधी सम्म बताउन झिझो मान्दैनन उनी । कमाई कति हुन्छ भन्ने कसैले जिज्ञासा राखे उनको जवाफ हुन्छ, ‘वर्षमा पाँच छ लाख रुपयाँ ।’
थापाले मह मात्रै होईन माहुरी (मौरी)का घारहरु पनि बेच्ने गर्छन् । माहुरी पाल्न ईच्छुक कोहि आएभने एक घार माहुरीको रु ७ हजार ५ सया र मह प्रति किलो रु १ हजारमा बिक्री हुने गरेको उनको भनाई छ ।
उनी जिल्ला कृति विकास कार्यालय, बागलुङ र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण पुरस्कारबाट पुरस्कृत भएका छन् । माहुरी पालन व्यवसायमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, मौरी पालन महासंघ आदिबाट सहयोग पाएको उनको भनाई छ ।
उनी यस व्यवसायबाट सन्तुष्ट छन् ।
कक्षा ८ र ५ मा अध्यनरत रिजाल दाजु भार्इव्दारा म्याग्नेटिक कारको आविष्कार !